Richard Stallman: karịa na arụkwaghịm ya | Site na Linux
Ọfọn, ozi banyere Richard Stallman arụkwaghịm na ọkwa ya na MIT na FSF Echere m na o juru onye ọ bụla anya. Ọbụna Amaghị m banyere ikpe Epstein, n'ihi na anaghị m esokarị TV ma ọ bụ mgbasa ozi ọzọ ọtụtụ. Amaghị m ihe merenụ ma chọọ ịmepụta otu isiokwu na-akpọsa ozi ọma mana na-enweghị oke mmiri ka enweghị m data zuru ezu iji kwuo. Ma ugbu a, ụfọdụ nkọwa (nke masịrị m) na ozi m nwetajikọtara n'okwu a emeela ka m lee ikpe ahụ anya nke ọma.
Gịnị mere na ị na-ama, ma ugbu a, anyị na-aga ozi ndi ozo na amaghị m, mana echere m na ọ dị mkpa dị ka ihe mgbakwunye na isiokwu m ọzọ ka ị wee ghọta ihe niile nke ọma. Ebe a kwa Ana m ahapụ njikọ nke isiokwu ahụ rịọrọ arụkwaghịm nke Richard Stallman nke ebubo ya maka ozi ịntanetị ndị agbachitere banyere echiche nke rms n'onwe ya nwere n'okwu a. Yabụ ị ga - ahụ ụzọ mmalite nke ozi ahụ nke kpatara ihe niile a ...
Echere, nwa agbọghọ ahụ weere ozi ịntanetị sitere na MIT nke Richard Stallman nyere echiche ya. Ọ na-ekwu na Epstein jụrụ ya nwee mmekọahụ na onye otu MIT nwụrụ na 2016 (Marvin Minsky). Stallman ga-agbachitere Minsky site n'ikwu na onye ọrụ ibe ya enwebeghị mmekọahụ na nwa agbọghọ maara na a manyere ya. Otu onye akaebe nọ ebe ihe a mere gosiri na nwatakịrị nwanyị bịarutere, mana Marvin jụrụ ya.
Mee ka o doo anya A nwalere Jeffrey Epstein, mara ikpe ma maa ikpe maka ịzụ ahịa ụmụaka, ma gosipụta ya dị ka onye mmegbu nwoke na nwanyị. N’ụlọ mkpọrọ ebe ọ nọ, ọ gbalịrị ọtụtụ ugboro igbu onwe ya. O yikwara ka ọ mechara nweta ya. Na August 10, 2019, ahụrụ ozu ya na cell na ihe niile na-arụtụ aka na igbu onwe ya, agbanyeghị na ụfọdụ ọgbaghara ndị ọzọ rụtụrụ aka na ihe ndị ọzọ ...
Ọ bụ eziokwu na ụfọdụ nkwupụta Stallman wepụrụ site na gburugburu nwere ike ọ dị njọ ma ọ bụ ghọtahie ya. Ma nke a nwere ike ịbụ ikpe. Ọ bụkwa eziokwu na kemgbe ụwa, Stallman emeela nkwupụta banyere mmekọahụ ndi jee na-agbanwe site n'ụzọ ya si ahụ ihe na ịmata mgbe o mehiere. Na nkenke, na nkwupụta ndị a ọ na-ekwu na:
Mmadu di njikere inwe mmeko ozigbo o ruru ogo nwoke na nwanyi. Na na ọ dịghị ihe dị njọ na onye ọgbọ nke inwe mmekọahụ bụ onye pere mpe yana inwe nkwenye na okenye. [N'ezie, nke a na-eme ọtụtụ mgbe na ọha mmadụ]
Mgbe mkparịta ụka gasịrị, ọ chọpụtara na ọ bụghị naanị gbasara anụ ahụ, mana enwekwara akụkụ uche. Ya mere, chee na nwatakịrị (ọbụlagodi na o tozuru okè inwe mmekọahụ) na onye toro eto nwee mmekọahụ n'ihi na ọ nwere ike ibute nwatakịrị ahụ nsogbu mmụọ. [Ọ naghị akwado ịra n'ike n'ike, ma ọ bụ omume rụrụ arụ, ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri nke ahụ]
Ka oge na-aga, ọ gakwara n’ihu ma mata na ọ dịghị mma ka nwatakịrị nwee mmekọahụ n’etiti onye toro eto n’ọnọdụ ọ bụla. Ọbụna na nkwenye gị.
1 Ebe igodo?
Nke ahụ kwuru, sị, M na-alaghachi na isi akụkọ na arụkwaghịm ya nke ọnọdụ site na nrụgide ndị ahụ. Karịsịa nke ọma na ozi ịntanetị ejidere ya nke ejirila mee ihe maka ịza ajụjụ banyere ikpe Epstein na ndị ọzọ. Ihe ekwuru na ozi-e ndị ahụ banyere ikpe ahụ m kwuru tupu Minsky bụ:
«Okwu a bụ 'mwakpo mmekọahụ' bụ ihe na-edochaghị anya ma na-amị amị amị ... she o gosipụtara onwe ya na Minsky zuru oke.»Nzaghachi na eri nke ozi ịntanetị site na MIT nye ụmụ akwụkwọ ụfọdụ ndị rịọrọ na ntanetị mmekọrịta maka ngagharị iwe banyere ihe mere. Mana, ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na enwere onye akaebe hụrụ ya niile na ọ mere otu ahụ, Stallman nwere ike ịbụ eziokwu.
Ihe niile maka ikpe metụtara mbubreyo Marvin Minsky E boro ya ebubo na ọ wakporo otu n'ime ndị Epstein metụtara. Okwu a "mwakpo mmekọahụ" siri ike maka Stallman, ebe ọ bụ na ọ dị ka Epstein n'onwe ya manyere onye ahụ ime ya, ọ bụghị Minsky. Ikekwe ihe na-adịghị mma n'ebe a ga-abụ iche na onye a manyere amanye na-ewere onwe ya na "ọ dị oke njikere" ime ihe, ebe ọ nwere ike iyi na ọ sitere na nkwenye nke ya ma ọ bụghị. Echere m n'onwe m na ọ bụ ebe niile ihe na-akpata nghọtahie.
Ọ bụ okwu ahụ n'onwe ya, ọ bụghị eziokwu, ka Stallman kpebiri. Onye ọ bụla ma akụkọ Richard na ụdị mmadụ ọ bụ nwere ike ịghọta ụzọ ya. A na - ekwu na ọ na - arịa ọrịa Asperger, na anaghị m eme ya ngọpụ. Ma n'onwe m enwere ụfọdụ àgwà na ụdịdị autism na ọ na-emejọ oge ụfọdụ ịghọta ụfọdụ ihe ndị ọzọ na-aghọta n'ụzọ dị mfe.
N'ọnọdụ ọ bụla, Stallman dị ugbu a na-ewu ewu ma na-ede akụkọ maka okwu ole na ole. Achọrọ m ime ka o doo anya ọzọ. Na ọdịghị ka ọ mere mpụ ahụ (Naanị ya nyere echiche ya), ekwuru m ya n'isiokwu nke mbụ ma kwuo ya ọzọ ebe a ... Ọ bụ ya mere o ji mata na ọgba aghara a niile bụ n'ihi «usoro nghotahie na emeputara ihe".
Anaghị m ekwu ya maka ikpe a, ma ọ bụ maka onye ọ bụla ọkachasị. Ana m ewere onwe m dịka nwanyị, mana biko, ụfọdụ ụmụ nwanyị na-akpọ onwe ha ndị nwanyị na ha na-emebi ọtụtụ ihe gbasara ezigbo nwanyị. Ezigbo nwanyị bụ nwanyị chọrọ nha anya nwoke na nwanyị, ọ bụghị ikike ụmụ nwanyị karịa ụmụ nwoke. Nke ahụ ga-abụ "Hembrismo" ma ọ bụ "misandría" na o gaghi emeghari ka nwanyi, nihi na obughi ya. Biko biko, ejikwala okwu feminazi
Banyere okwu metụtara mmekọahụ, achọrọ m ime ka o doo anya na m na-atụle idina mmadụ n'ike dị ka otu n'ime mpụ ndị kasị njọ enwere ike ime ya, ya na igbu mmadu. Ma enwere ihe dika ihe aru dika onye dara ya adighi ekpe ya ikpe ma kwuo ugwo ya, nke ahu bu na onye emeghi ya ma obu onye ikpe adighi ya mara ya ikpe ... M kwughachiri, adighi m ekwu okwu banyere otu okwu, ma Ọ dị m ezigbo njọ.
More data na ozi na isiokwu a, ka i wee nwee ike iru nkwubi okwu gi (Ọ bụ n'asụsụ Bekee, mana ọ bara uru ịgụ, ọbụlagodi na a sụgharịrị ya ma ọ bụrụ na ị maghị Bekee, n'ihi na ọ nwere ozi na-atọ ụtọ, ọkachasị nke abụọ):
On Richard Stallman onye ndu nke FSF.
Nkwupụta nke onye mmemme na-arụ ọrụ ogologo oge na Richard Stallman.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Richard Stallman: karịa na arụkwaghịm ya
Amaghi m akuko ahu nke oma ... Agam ano na okwu ya maka GNU ma obu ihe ihere ka otu akuko ahu si gwu
Zaghachi Ado Ello
N’ebe a kwa, ụfọdụ ndị na-eme omume ọma chọrọ ịba aghara ma kpọsaa onwe ha, jiri egwuregwu ọzọ a na-akwa emo na ọ bụ n’obodo na-enye ha nnwere onwe ikwu uche ha! Mwute na ọ gbara arụkwaghịm, n'ọnọdụ ndị a, ọ masịrị m ikike Torvalds karịa, ọ ga-eziga ha ka ha buru ifufe ma ọ ga-adị ọhụrụ.
Ekwere m n'eziokwu na enweghị ike inwe isiokwu ndị ọzọ n'isiokwu a. Ọbụna ma ọ bụrụ na onye edemede ahụ kpọrọ onwe ya 'nwanyị', echere m na ọ kwesịrị iche banyere ya. RMS n'afọ ofufo ma na-arụsi ọrụ ike (ọ dịghị onye jụrụ) kpebiri ịkwado onye na-enwe mmekọahụ na obere onye ahịa ahia. Ma kama imechi ma ọ bụ jụọ ajụjụ nke octogenarian ahụ e kwuru n'elu, o kpebiri ịjụ akụkụ kachasị ike. Nke a bụ akụkụ nke akụkọ ntolite nke mkparị na-emetụta nwanyị.
Site na Chukwu, feminism (nke onye ode akwukwo kwuru abughi “ezigbo” ya, dika a ga-asi na o nwere ikike ikpebi nke bu ezigbo ya) na-acho iha nhatanha n’etiti mmadu nile mana o putara na n’ezie o dighi adi ma egosiputara na ọtụtụ ebe. Ọ dị ka ọ dị na teknụzụ na ọbụnadị na ngwanrọ "sọftụwia na - akwụghị ụgwọ" (dịka ọ na - eme na ọnọdụ ndị ọzọ nke ịkpa ike).
1-Ebubo ebubo ma enyekwala ihe akaebe. Gwa m isiokwu ị hụrụ.
2-Abụ m nwanyị, anaghị m atụgharị uche na nke ahụ. Ma enwere ndị ọzọ na-ezochi onwe ha n'ime nwanyị iji bibie nwanyị n'onwe ya.
Dịka ọmụmaatụ, ndị na-etinye echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ya, n'ihi na nke a abụghị ihe aka ekpe ma ọ bụ aka nri, ọ bụ ihe onye ọ bụla.
Echiche 3-RMS gara na listi nzipu ozi na ọ bụ onye na-anwa ime ihe ziri ezi. Naanị ihe ọ mere bụ ịjụ iji okwu a "mwakpo" ọ bụghị omume ahụ n'onwe ya. Aghọtara m na ikwu mwakpo dị ka a ga-asị na Mevin ji ọsọ gbakwasị onye ahụ, ọ dịkwa ka a manyere onye ahụ ka ọ mee. Adịbeghị m ebe ahụ ma enweghị m data zuru oke yabụ enweghị m ike ikwu ọtụtụ ihe.
4-omume mkparị? RMS na ọkwa mmekọrịta abụghị nke kachasị mma, Torvalds adịghịkwa (lee CoC, ma nweta enyemaka). Adịghị m mma na ya n'onwe m. Mana ma ọ dịkarịa ala, m na-agbalị ime ihe ziri ezi dịka o kwere mee. Ma ị nweghị ike ịgbanye mmadụ ma chee ma ọ ga-abụ na ha bụ ndị aka ha dị ọcha. Na nke a RMS enyela echiche ya naanị. Ọ bụrụ na m nwere, dịka ọmụmaatụ, site na Epstein, mgbe ahụ agaghị m akwado RMS. Ma ọ bụghị ikpe.
5-Enwere m ikike dịka ịkọwa nwanyị. Iha nha adighi, nke ahu kpatara nwanyi ji adi. Nke ahụ pụtara ìhè. na? Kedu oge m dere ma ọ bụghị?
Biko, ana m ajụ ihe ndị ọzọ ga - eme n'ọdịnihu ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa ịkatọ ihe m dere (ọ bụrụ na ha ziri ezi m ga - anabata ya), mana ọ bụghị ụdị nkọwa a na - enweghị isi na ikpe m n'amaghị m, ọrụ m nwere gburugburu nwanyị (na njikọta nke ụmụ nwanyị na STEM), ma ọ bụ omume m… Daalụ.
1- Menmụ nwoke na-agbachitere ụmụ nwoke ndị metụtara ịzụ ahịa na omume ndị ọzọ metụtara mmekọahụ, na-edepụta "hembristas" ma ọ bụ "feminazis" (ee, amaara m na ị mebeghị ya na nke ikpeazụ) ụmụ nwanyị na-agbachitere ikike ha n'ụzọ na-adịghị mma maka ụmụ nwoke na-emegbu ha ...
2- Feminism B political ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Kedu ka ngwanrọ n'efu, veganism, ọgụ megide mgbanwe ihu igwe ma ọ bụ megide ịkpa ókè agbụrụ na homophobia. Ihe niile bụ nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị, yabụ iyipụ nwanyị nwanyị abụghị ihe kachasị "nwanyị" nwanyị. Na ijikọta ya na isi 5, ikekwe mụ na gị nwere otu ikike ịkọwa ya. Mana onye nwere ikike ịkọwa ya bụ ndị protagonists nke mgba ahụ: ụmụ nwanyị. Ọ bụghị anyị.
3- "Echiche RMS gara na ndepụta nzipu ozi na ọ bụ onye na-anwa ime ihe ziri ezi." Amaghị m ihe ọ na-anwa ịbụ ma ọ bụ na ọ bụghị, naanị m na-eji omume ya akpọrọ ihe. Site na echiche m, izipu akwụkwọ ozi (nke na-enweghị onye rịọrọ) iji kwuo na "mwakpo" bụ okwu na-ekwesịghị ekwesị maka enyi ya bụ mbọ iji weghachite na iwelata ihe o mere. Ma ọ dị oke njọ.
4- Ọtụtụ ihe: Anaghị m ekpe ikpe ziri ezi gị mgbe m na ndị enyi gị na-emekọ ihe. Banyere RMS, iji kwuo na ajụjụ ọnụ na ha anaghị echeta na nwanyị ọ bụla nwere mmasi inye onyinye na FSF (mgbe n'ezie enwere ụmụ nwanyị mere nke a n'oge a gbara ajụjụ ọnụ) ma ọ bụ nwee ọnụ ụzọ ha «[…] "girlsmụ nwanyị nwere agụụ mmekọahụ" bụ agwa mkparị n'ebe ụmụ nwanyị nọ. Ihe a na-ekpe ikpe bụ etu omume ndị a si emerụ ụmụ nwanyị na ụwa nke teknụzụ. Nkwupụta na echiche nwere nsonaazụ ya wee dị mkpa.
Ekwuola m echiche m dabere na ederede ị dere na esemokwu m nyere na-adabere na ya. O doro anya na amaghị m ihe gbasara ndụ gị.
Ingga site n'ịgwa ndị mmadụ echiche na-ahapụ isiokwu edemede a, na-enyekwa echiche n'okwu dị na mpụga isi okwu dị n'etiti etiti ara, na-ebelata nka nke saịtị ahụ. Ọ bụ ihe nwute.
Obi afuu ????
Dị ka ị si kwuo, ụdị isi akụkọ a ka mma, nri?
Anyị na-arụkọ ọrụ iji mepụta ụwa ebe nnwere onwe echiche ga-apụ n'anya, na ebe echiche ga-ezuru iji weta mmadụ ikpe. Echeghị m na nke ahụ dị mma ...
Isaac, obi ahuwo Nnam si ikwu agha. A nkwusa bụ a nkwusa na m kwere na ọ dịghị mkpa iji chebe ma ọ bụ yie ndị ziri ezi; mmeghachi omume bụrịrị ihe ịrịba ama nke mmeri.
Ọ nọ na-achọ ịza ajụjụ bara uru. Ma ị kwenyere ma ọ bụ na ị kwenyeghị na ọdịnaya ahụ, na-enwe ekele maka oge na mbọ gị.
Ng 13 dijo
Ọ bụ arụmụka na onye edemede kwupụtara na ya bụ "nwanyị".
M hapụrụ ngalaba nke isiokwu na-adọrọ mmasị na isiokwu ahụ.
“Ka anyị chetakwa na ọ bụghị naanị Stallman pụtara ịzọchitere onye isi ụlọ ọrụ MIT, Joishi Ito. Ndi ozo a ma ama site na uwa nke omenala dika Lessig na Negroponte emeela ya. O zuru ezu n'àgwà a nke ìgwè ehi nke ndị ikom na-agbachitere ụmụ nwoke maka eziokwu nke ịbụ ụmụ nwoke. Enweghi "ojoo ojoo" site na ndi nwanyi.
Mụ nwanyị abụrụla ma na-emebi iwu n'akụkụ niile site na ụmụ nwoke ndị na-egosipụta ike ha ma jiri ọnọdụ ha mee ihe: na sinima, na opera nakwa n'ọhịa nke teknụzụ na mmegharị mmekọrịta. Anyị onwe anyị ga-ekpebisi ike ileghara ya anya n'ihi na ọ bụghị anyị na-ata ahụhụ na ọ bụ ndị na-eme ya.
Okwu a dị ezigbo nhịahụ, mana ọ dị mma na a na-amata banyere mmebi ọ na-eweta ... ọ dị nwute na mgbanwe mgbanwe a na-egbu mgbu ma n'agbanyeghị agbanyeghị obere ihe ị na-etinye, ọ bụ oge ka onye ọ bụla mee. Nsogbu anyi huru ebe a bu na poteto a na ekpo oku nke na onye obula rutere ya nso nwere ike igba oku. Enwere m olileanya na ihe niile na-arụ ọrụ n'ụzọ kachasị mma maka Mr. Stallman. na Aịzik anaghị ewere ihe anyị kwuru n'obi, ị bụ onye editọ ebe a ma ọ bụrụ na anyị gụọ post ọ bụ n'ihi na anyị chere na ha bụ ezigbo ihe ọmụma. Ana m ekele gị nke ukwuu maka ọrụ ị na-arụ.
Ee, ọ ga-aka mma ịhapụ isiokwu ahụ ruo mgbe enwere ọtụtụ data na ịmara otu esi ejedebe ihe niile.